DAAWO-Kaarayaashii iyo hubkii Puntland ku soo bandhigtay Galkacyo & wasiiro shaaciyey sababta.
April 8, 2021 Xuseen 15
Puntlandtimes (GALKACYO)-Taliyaha guud ee ciidanka Daraawiishta iyo wasiiro katirsan Puntland ayaa xerada Siinaay ee magaalada Galkacyo ku soo bandhigay gaadiidka dagaalka iyo hubka culus oo lagu ilaalin jirey xeradaasi sida goobta laga sheegay.
Saraakiisha gacanta ku hayey hubkaan ayaa waxa ay sheegeen inay diyaar u yihiin difaaca Puntland isla markaana hubkaan ay ku shaqayn doonaan ciidamada Daraawiishta dowladda Puntland ee ku sugan magaalada Galkacyo & deegaamada kale ee Puntland.
Mahad Ali says:
Hubkaan waa bililiqdii shacabka somaliyeed Qabiil baa haystay,waa su,aal tuqarak maxaa loogeeyn,waayay oo cidamada somaliland u jiraan 15 km garoowe? Cidamada lascaanood ka soo carareen reer rooraaye, maxaa loo difaac waayay laascaanood meeday beenta harti ? Sheeko xariir reer rooraaye
tukaraq iyo laascaanood waxa iska leh dhulbahante iyagana jooga waana gardaro in wiil reer mudug majerteen ah uu wiil dhulbahante ah kula dagaalo dhul dhulbahante,,waxa tiri rer rooraaye bal kusoo orod aad caano ka dhantide
@ Mahad Ali adeer Tukeraq yaa qabsaday yaase laga qabsaday. Tukeraq Dhulbahante ayaa degan kuwa qabsadayna waa Dhulbahante Laascaano kuwa joogaana waa Dhulbahante yaa marka Tangiyada la dulmariyaa ma Dhulbahante? Waxaan filayaa caruur caga wayn inaad tahay oo aan xaajo waxba kala socon. Hubkan dadkii dalkan iskalahaa hormuudka u ahaa ayaa haysta ilkayar iyo inangumeedo homless ah waxba uguma jiraan meesha uu ka howlgalayana adigu ma go aamin kartid jamhuuriyada Puntland Rebublic ayay u taalaa. Ciidanka aad tiri rooraaye waa Dhulbahantaha iimaan ka beelay oo hadba gar u yaaca kuwaasina macno badan maleh. Puntland is very powerful than ever before xansharaad kastana waa la buufinayaa.
Reer Khaatumo hubkaan hadii la geeyo Tukaraq habeen bay la guurayn, mideeda kale reer Khaatumo iyagaa dhulkooda iska qabsaday ee cidi kama qabsan, markay dalkooda iyo dadkooda aaminaan baa la garab istaagi, weligaa haku fekerin in wiil Reer Sheekh Isaxaaq ah nin Majeerteen ah la diriro waayo Khaatumo Puntland waxay ka jeceshahay Farmaajo.
Reer sheekh Isaxaaq aan ku heshiino inaan is nabadgelino baa iiga roon Harti I dhabar jebiya.
Farmaajo baa loo gacan haadin, xataa kuwa jooga Garoowe.
Imisa jeer buu Axmed KARAASH dhabar jebin maagay ilaahay baa i bixiyay.
War waxani waa taangiyo howlgab ah oo T54 ama T53 oo ah kuwii Ruushka oo xitaa aan dhaqaaqi karin, waxa ay ahayd in la geeyo meelaha lago keydiyo qalabkii hore ee dagaalka si dadko u daawado.
@ Hamite thanks bro dhuloos inta dhulkoodii ay isaaq shilimaad kagasoo qaateen oo ay iyaku wakiil uga noqdeen Iidoor inay u bahdilaan Dhulbahante ayay hatana qiira Japan kuula iman caqli xumadooda yaase dhagaysanaya warkooda ileen waa wax falane. Hubkaa maanta Iidoor haysto waa hubkii Dhulbahante ee ini Baydan gacanta ku hayay.
QOLKAAN CAYAYAANKA BARAHA BULSHADA AYAA DHEX DEGGEN ( C B B).
LAAACAANOOD WAXAA JOOGA JAAMAC SIYAAD IYO BAH HARARSAME OO KA QAYILA IIDOORKAAN KU WAASHAY AQOONSIGA.
MA LABA TAANGI OO DUUGAA WAX QABAN KARA. MIDA KALE DADBAA WAX ISKA DHACSHA EE QORI WAX MA CELIYO. QOFKA BOOTADA BADAN WAA CEEBOOBAA MARKA DAMBE EE BULUQDA INTA LA JOOJIYO TARTIIB UMADA HALOOLA NOOLAADO. WAA IGA TALO. WALLEE CID DAAROOD IYO HAWIYE TOONA OO WAJI FIICAN NOO HAYA AMA NOO SOO GURMANI INUUSAN JIRIN. RUNTA HALA SHEEGO
April 9, 2021 at 3:58 am
MOHAMED NUGAAL ADIGA DAD BAA LAGU QABSADAA, DHULBAHANTE ISAGOO DHEXDIISA ISKU XUMEYNAYA AYAY JAAMAC SIYAAD IYO BAH HARARSAME INTI AY IIDOOR SOO KAXEEYEEN KEENEEN LAAACAANOOD. CALI SANDULE IYO XAABSADE AYAA DHABAR JABIYAY CIIDANKII PUNTLAND MARKA RAGGA DHEXDIISA KAMA KAFTAMI KARTID CIIDANKA PUNTLAND MA DACAAYADEYN KARTID SHUT UP
MOHAMED NUGAAL XAQIIR BAA TAHAY WAAYO
REEE PUNTLAND AYAGOO DAAROOD CAAWIYA OO U GURMADA EE MAREEXAAN GURMADA UU SOO GURMADO ISKA DAAYEE ISAGAA HAWIYE INOO SOO RAACI JIRAY TUSAALE BARRE HUURAALE SOO MA AHAYN KII AY CEYRKA KEENEEN KISMAAYO SEERAR/GOOBAALE.
MAREEXAAN BEEN AYAY 24 SAAC MEELAHA KA SHEEG SHEEGAAN GAALKACYO ANAGAA HAWIYE KA XOREYNAY AYAY DHAHAAN WAA BEEN.
1991 MAREEXAAN WAXAY XAMAR UGA CARAREEN MAMA KHADIIJO WALAAHI WAXAA BADBAADIYAY WIILAL DHAFOOR QIIQ MJ AH OO UU WATAY MORGAN MARKA NAC NACLAYAL IYO XAQIIRIIN WAXAY RABAAN HA SHEEGAAN
@ Mahamed Nugaal adeer dumarka lagu ogaa inay raga caashaqaane adigu maxaad ku caashaqday ini fargaajo? . Puntland waa hormoodka somaliya waa boqortooyadii iyo salaadiintii Bari ilaa hobyo xakumaysay hadiiba domaliye ilbaxnimo iyo xadaaarad sheeganayso waa Puntland. Hadii dagaal iyo xabad la rido iyo jamhadayn laga hadlayo waxaan filayaa Puntland ayaa ku suntan, waxaan filayaa inadan war badan qabine waalidka hoos u warso taariikhda Boqor Cismaan iyo Talyaanigii soo weeraray ee xaafuun madaafiicda ku qaraacay, dagaaladii sayid maxamed Cabdule xasan ku qaaday Bari ee ku jabay aabayaashaa soo warso. Qooqaagii afwayne markuu doobinayay somali oo dhamina u wada sacbinaysay kuwii futada farta ka geliyay ee albaabada naaraha ku furay 1978 kii soo warso aabayaashaa, afwayne markii Muqdisho uga carareen canaasiirtii Daarood yar yare dhafoorqiiqdii badbaadisay isaga iyo habartiisii khadiija ciday ahaayeen soo warso aabayaashaa. Somaliya markii burburtay dowladna laga quustay kuwii xooga kusoo celiyay dowladnimada somaliya villa wardhiigleydaas ini fargaajo ku dhex ciyaarayo keenay dowlada ciday ahaayeen soo warso wixii ku dhalay haday maskax fiyow leeyihiin. Halgankii somaliya ee xornimodoonka dadkii hormoodka u ahaa 13 SYL 5 ka mid ah oo uu ku jiro asaasihii Daahir xaaji Cismaan Daahir Dhagawayne ciday ahaayeen soo warso adeeradaa. Puntland inay tahay mudanka somaliya maskaxda iyo maanka soo warso kuwa garaadka kugu dhaama. Caruurta iyo canaasiirtu waxaa loogu sheekeeyay Puntland xabad ma ridaan oo Tukeraq ayaa laga qabsaday balse isma waydiin Tukeraq yaa leh yaase laga qabsaday yaase qabsaday, Laascaano yaa qabsaday yaase laga qabsaday? Dhulkaas dhulka ayaa leh kuwa qabsadayna waa Dhulbahante yay marka Puntland la dirirtaa ma Dhulbahante ayay birta ka asashaa? Waxaan filayaa inay caqli xumo tahay in Dhulbahante laysku madhiyo waana sida Iidoor ku rabo bil xaqiiqa Puntland way fahansanthay arinkaas. Puntland wax badan ayaa lagusoo duulay wsligeedna lagama faa iidin dhulka Puntland oo ah kala bar somaliya waa amni iyo barwaaqo marka laga reebo argagixisada buuraha calmiskaad iyo calmadow ku dhuumaalaysta oo iyaguna aan macna badan lahayn. Puntland waa meesha kaliya ee ka xor ah amison iyo Ugandise marka laga reebo somaliland inta kale somaliya amison ayaa ka howlgasha taasina waxay ku tusin awoodooda ciidan iyo bulsho. Maxamed Nugaal niicle waxaan oranlahaa nacayb iyo xisdi Puntland waxba uguma dhimi karto waxaadna tahay kuwa ku hoosnool e wuxushta ah meelaha kalena u orgood taga
@Ibraahim iyo will wamo.
Sidii habrahii maxamuud salabeen baad u hadleysan boor leysku qariyo waxba sheegi meyso…iska dhaaf dhulbahante xitaa sheshiis ma tihiin daroodka kale ee dega Puntland iyo waliba majeertenka dhexdiisa. Maximum saleeban ku siyaasadda wey ku fashilmey ilaa 1998 seddex habrood oo maxamuud salabeen ayey xukunka ka dhaxeysay…dhul Dhulbahante ma hayaan dhulkooda waxeyna rabaan iney barlamaka federal ku darsadan xildhibaano MATALA Puntland kana soo jeeda dhulbahante bal caqligaas iyo maangabnimada maxamuud salabeen fiiri waana waxa ummada la yaaban yihiin.
Naasirow, inkasta oo aanan ahayn Mohamud Saleebaan, haddana waxaa hubaala in dhaqanka Soomaalida ay ceeb weyn ku tahay haweenka Soomaaliyeed oo wax laga sheego la caayo. Marka taas laga tago xusuuso hooyadaa, walaashaa, xaaskaaga, iwm waa haween Soomaaliyeed. Tan labaad, miyaanad ogayn in aakhiro wabiilkaas dhan oo aad caayeysid saf u soo gelayaan ajarkaaga deedna aad sidaas muflis ku noqonaysid sidii nebigu (scw) xadiiskiisa ku yiri. Muflisku waa qof aan ku haysan aakhiro wax ajar qadaf uu dadka u geystey awgeed. Qofkaas xaalkiisa allaha inagama dhigo. Tan saddexaad, qabiilka webkaan loogu cay badan yahay waa Mohamud Saleebaan, waxaa hubaa sida diintu tiri inaad ajar u shaqaynaysaan. Qofka oo la caayo iyo qabiilka oo la caayo denbi xun oo u baahan qofkii ama qabiilkii in cafis la weydiisto si alle kuu cafiyo. Anigu kii wax soo cabbay xisaabta kuma darin waayo waa qof caqligii ka maqan yahay, laakiin intiina aan daroogeysnayn fekerkiina si edeb leh oo aan denbi ahayn u dhiibta iskana daaya laqwiga.
@Naasir adeer Daarood oo dhan qaado oo jeebka ku rido uma baahnin Daarood ee iyakaa noo baahan. Daarood waa majeerteen iyo wax aan jirin markaa anigaad hooskayga harsataa your absolutely nothing.
Midowga Musharixiinta oo sheegay in RW Rooble uusan daacad ka ahayn doorashada.
Puntland oo lacag ku maalgelinaysa ururada siyaasaddda & Axmed Karaash oo u hanjabey.
Puntland oo ku guuleysatay qabashada hub laga keenay dibada Soomaaliya.
Axmed Karaash oo si deg deg ah u gaarey magaalada Qardho oo diiwaangelin laga bilaabi lahaa & xogta soo korortay.
Puntland oo maanta ku dhaqaaqaysa fulinta go’aamo muddo dheer la sugayey & qabashada doorasho.
Qaban qaabada shirka madaxda DFS iyo dowlad goboleedyada oo Muqdisho ka bilaabatay.
DEG DEG: Ciidanka Haram-cad oo qabsaday caasimadda mid kamid ah maamul goboleedyada.
Mid kamid ah caasimadaha dowlad goboleedyada oo la go’doomiyey & mas’uuliyiin gurmad dalbaday.
Somaliland oo deegaamadeeda ka mamnoocday mid kamid ah beelaha degan Koonfurta somalia.
Siyaasiyiinta gobolada Waqooyi oo shuruud hordhigay Ra’iisul Wasaare Rooble & shirka arrimaha doorashooyinka.
Madaxweyne Muuse Biixi oo dalbaday in la dardargeliyo qabashada doorashooyinka.
Ciidanka Somaliland oo la wareegey deegaamadii lagu dagaalamay ee Gobolka Sool.